EBEE IBUDATA AEYRC.DLL FAỊLỤ MAKA CRYSIS 3 N'ỤZỌ ZIRI EZI - ISIOKWU - 2019
Ya mere, ọ bụrụ na egwuregwu Crysis 3 adịghị amalite ma njehie na-egosi na mmalite nke usoro ihe a agaghị ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ achọrọ aeyrc.dll faịlụ adịghị na kọmputa, ebe a ka m ga-agwa gị ihe ị ga-eme iji dozie ya. Nsogbu yiri ya: cryea.dll na-efu na Crysis 3
Ọ bụrụ na ị malite ịchọ ebe ị ga-ebudata aeyrc.dll maka Windows 8 ma ọ bụ 7 na n'efu na Intanet niile, ị ga-enwerịrị ike ịnweta otu n'ime nnukwu nchịkọta nke DLL faịlụ, nke a agaghị emezigharị njehie ahụ, n'ihi na ihe kpatara ya dịtụ iche, karịa ka i chere.
Ntak emi uredc.dll ama okpu ye nte enye akanamde enye
Dịka ọ dị na ọnọdụ mgbe cryea.dll faịlụ na-efu na Crysis 3, njehie a kpatara site n'eziokwu ahụ na ụfọdụ antiviruses (gụnyere Windows 8 antivirus) wuru aeyrc.dll dịka nje na ma na crantine ya, ma ọ bụ wepu na kọmputa. Ọ bụ ezie na, n'eziokwu, faịlụ a gụnyere n'ime ihe ntinye egwuregwu.
N'ihi ya, ụzọ ziri ezi rụọ ọrụ na ọnọdụ a - gbanyụọ ngwa ngwa ngwa nke omume na antivirus gị mgbe ịchọrọ egwu, tinye oke dịka "Rịọ mgbe niile" (dabere na antivirus eji).
Mgbe nke ahụ gasịrị, weghachite Crysis 3, na mgbe usoro antivirus na-akọ na enwere egwu na aeyrc.dll ma ọ bụ cryea.dll, kagbuo ihichapụ faịlụ a site na itinye ya n'ime ihe ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, na mmemme na egwuregwu ndị ọzọ: ọ bụrụ na ihe mberede anaghị amalite n'ihi na enwere faịlụ na-efu, gbalịa chọpụta ihe faịlụ ahụ bụ na ihe mere ọ na-efu na mberede. Ọ bụrụ na ịnwere ibudata ya (ma o doro anya na ọ bụghị site na saịtị ọrụ ahụ), wee chọpụta ebe ị ga-esi wụnye ya, mgbe ahụ, ọ gaghị edozi nsogbu ahụ na nkedo, ma mgbe ị na-agbalị idebanye faịlụ ahụ, usoro ahụ ga-emehie dị ka nke dị n'okpuru.